बिहानको ०२ : ४८
भारतमा भइरहेको लोकसभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार अन्तिम तथा सातौँ चरणको मतदान भइरहेको छ । देशभरका सात प्रदेशका ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । ...
भारतमा आज अन्तिम चरणको चुनाव, गणना २३ मेबाट
५ जेठ, काठमाडौं । भारतमा लोकसभाको सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान भइरहेको छ । भारतमा ११ अप्रिलबाट लोकसभा चुनाव सुरु भएको थियो । आज अन्तिम चरणको चुनाव सकिएपछि २३ मेबाट मतगणना सुरु गर्ने तयारी छ । साँझ...
भारतमा अन्तिम चरणको निर्वाचन हुँदै, मतगणना मे २३ तारिख देखि
जेठ ५, नयाँ दिल्ली । भारतमा भइरहेको लोकसभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतवार अन्तिम तथा सातौं चरणको मतदान भइरहेको छ । देशभरका सात प्रदेशका ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले ...
भारतमा लोकसभा निर्वाचन, मोदी सहित ९१८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
नयाँ दिल्ली: भारतमा अन्तिम चरणको लोकसभा निर्वाचनका लाग मतदान भइरहेको छ। ८ राज्यका ५९ सिटहरुमा अहिले मतदान भइरहेको हो। ५९ सिटका लागि ९१८ उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा रहेको छ। अन्तिम चरणको निर्वाचनमा...
नयाँ दिल्ली– भारतमा भइरहेको लोकसभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार अन्तिम तथा सातौँ चरणको मतदान भइरहेको छ । देशभरका सात प्रदेशका ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले जानकारी ...
भारतमा सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान सुरु, मतपरिणाम अबको चारदिन पछि अाउने
news24nepal.tv . ४ महीना अघि
नयाँदिल्ली । भारतमा आज १७ औं लोकसभा अन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान सुरु भएको छ । यो चरणमा उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालसहित सात राज्य र केन्द्र शासित राज्यका ५९ सिटका लागि मतदान हुँदै...
नयाँ दिल्ली । भारतमा भइरहेको लोकसभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार अन्तिम तथा सातौँ चरणको मतदान भइरहेको छ । देशभरका सात प्रदेशका ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले जानकार...
भारतमा चुनाव : प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी मैदानमा
thahakhabar.com . ४ महीना अघि
भारतको लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान भइरहेको छ। अन्तिम चरणको निर्वाचनमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालसहित सात प्रदेश र एक केन्द्र शासित प्रदेशका ५९ सिटमा मतदान भइरहेको...
भारतमा लोकसभा चुनाव अन्तर्गत अन्तिम चरणको मतदान आज, मतपरिणाम चार दिनपछि
Ujyaaloonline.com . ४ महीना अघि
भारतमा लोकसभा चुनाव अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम चरणको मतदान आइतबार सुरु भएको छ । यो चरणमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालसहित सात राज्य र केन्द्र शासित राज्यका ५९ सिटका लागि मतदान हुँदैछ । सातौँ ...
भारतमा अन्तिम चरणको निर्वाचन, मोदी वराणसीबाट चुनाव लड्दै
nepalkhabar.com . ४ महीना अघि
मोदी भारतमा आइतबार अन्तिम चरणको लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। सातौं चरणको निर्वाचनका लागि विहानैदेखि मतदान जारी छ। ५९ सिटका लागि मतदान भइरहेको हो। यस चरणमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालसहित...
भारतमा आज अन्तिम चरणको निर्वाचन, मोदीको भाग्य फैसला आज हुँदै
rajdhanidaily.com . ४ महीना अघि
नयाँ दिल्ली, ५ जेठ । भारतमा भइरहेको लोकसभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार अन्तिम तथा सातौँ चरणको मतदान भइरहेको छ । देशभरका सात प्रदेशका ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले ...